शिक्षा रिसाल - कान्तिपुर समाचार
शिक्षा रिसालका लेखहरु :
किनकि जीवन सुन्दर छ
मलाई जीवनमा धेरै मामिलाले बिथोलिरहन्छन् । अक्सर एउटा प्रश्नले लखेटिरहन्छ- जीवनको कुन चरणमा पुगेपछि मानिसले त्यही जीवन सिध्याउँछ होला ? शरीरले सास छाड्नुअघि उसले ठ्याक्कै के सोचेको हुन्छ होला ? त्यतिबेला आँखाले देख्ने दृश्य कस्ता हुन्छन् होला ? अँध्यारो हुन्छ होला कि उज्यालो प्रकाश ?
हे पापिनी !
माघे संक्रान्तिमा बाँकी भएका तिल, लड्डु, चाकु अनि कहिलेकाहीँ सुन्तला र बदाम ! घरमा यस्तै हुन्थे– श्रीस्वस्थानीका प्रसाद । प्रसादको लोभले पनि हात जोडेर स्वस्थानीको कथा सुन्न बस्थ्यौं । बहाना स्वस्थानी भए पनि सबैको ध्यान प्रसादमै हुन्थ्यो । हाम्रो पुस्ताका लागि ‘स्वस्थानी’ एउटा ‘नोस्टाल्जिया’ हो ।
‘म शाकाहारी हुँ । मासु खान्नँ ।’यत्ति लेखेर बिट मारेको भए पनि हुन्थ्यो । न पढ्नेलाई झन्झट, न वनमारा भइने चिन्ता । न सम्पादकलाई घण्टौं लगाएर सम्पादन गर्नुपर्ने झमेला । (वनमारा अर्थात् ताइँ न तुइँका किताब लेखेर वन मार्ने र मास्ने लेखकहरूलाई कटाक्षस्वरूप भनिने शब्द ।)
भनिन्छ— संसार गणितीय छ । प्रकृतिका नियमहरू गणितको हिसाब वरपर घुम्छन् । ग्रह, तारा र अरू आकासीय पिण्डहरू गणितका नियम पछ्याउँछन् । दैनिक जीवनका भागदौड, सुख–दुःख, सफलता, असफलता सबै गणितीय छन् । केही अमूर्त कुराहरूबाहेक सबै चीजको हिसाब निकाल्न सकिन्छ ।
मान्छे घाट कि त कोही मरेपछि जान्छ, कि आफ्नै मन मरेपछि जान्छ । म यस्ता घाट थुप्रैपटक गएकी छु । लोकल घाट पशुपतिदेखि ‘अन्डर–रेटेड’ वाग्मतीका अरू घाट । किनकि मन मर्ने र ब्युँतने क्रम चलिरहन्छ ।
कहिलेकाहीँ सोच्छु । होइन, दिनको एकपटक त सोच्छु— म संसारको सबैभन्दा धनी भएँ भने के गर्छु होला ?विपरीतार्थी अर्को मनले उत्तिखेरै बूढी औंलो जमिनतिर तेर्स्याउँदै घुयँत्रो हान्छ, ‘देख्, देख् । सपना देखेको पैसा लाग्दैन । पैसा लाग्ने भए तँ संसारकै सबैभन्दा गरिब भइसक्थिस् ।’